ကမ္ဘာအေး တိပိဋကမဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်တွင် သံဃာတော်များနှင့် လူများအပါအဝင် ၁၅၃ ဦး ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရ - Zet Star
ကမ္ဘာအေး တိပိဋကမဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်တွင် သံဃာတော်များနှင့် လူများအပါအဝင် ၁၅၃ ဦး ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရ
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ကမ္ဘာအေး တိပိဋကမဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်တစ်ခုတည်းတွင် သံဃာတော်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ အပါအဝင် ၁၅၃ ဦးအထိ ကိုဗစ် ရောဂါ ကူးစက်ခံခဲ့ရကြောင်းယင်းမြို့နယ် ကိုဗစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထွန်းချစ်က အတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။
ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိသူများတွင် သံဃာတော်အပါး ၁၃၀ ကျော်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၂၀ ကျော် ပါဝင်ကာ ဓာတ်ခွဲနမူနာရယူ၍ PCR နည်းဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ရှင်းပြပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့က ဒီနေ့ သတင်းရတယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ပဲစစ် နိုင်အောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ပြောမယ်ဆို ရက်မကူးဘူးပေါ့။ သံဃာတော်တွေ တစ်ပါး၊ နှစ်ပါး ဖျားတယ်ဆိုကတည်းက တစ် ကျောင်းလုံးကို စစ်တာ။ ဒါ ကြောင့်လည်း ဒီရက်ထဲ ကျွန် တော်တို့မြို့နယ်က ပိုးတွေ့လူနာ အတွေ့များတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးထွန်းချစ်က ပြောပါတယ်။
စစ်ဆေးမှုများကို တပ်မတော်ဆေးအဖွဲ့က တာဝန်ယူစစ်ဆေးပေးခြင်းဖြစ်ကာ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နှင့် ၁၁ ရက်တွင် ဓာတ်ခွဲ နမူနာများ ရယူစစ်ဆေးခဲ့ကာ စုစုပေါင်း သံဃာတော်အပါး ၃၀၀ ကျော်ရှိပြီး ပိုးတွေ့လူနာ တွေ့ရှိမှုကြောင့် ကျောင်းတိုက် ကို လော့ဒေါင်း ချထားကြောင်း ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိ သော သံဃာတော်များအား မင်းဓမ္မလမ်းရှိ ကိုဗစ်ကုသရေး သံဃာ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားပြီး လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျန်းမာရေး တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်လျက်ရှိသည်ဟု ဦးထွန်းချစ်က ဆိုပါတယ်။
← လူနာတွေ အကုန်လုံးကို Q ဖို့က အရေးကြီးသလား? ကာကွယ်ဆေးက အရေးကြီးသလား?
အသုံးမဝင်တော့တဲ့ လော့ဒေါင်းစနစ်နဲ့ ခြောက်သင့်တာ ခြောက် ကြောက်သင့်တာ ကြောက်ရမယ့် အခြေအနေ →